Umsebenzi weziziphicaphicwano – Buza Noma Yini
143 views May 7, 2021 Amasiko
Anonymous	 May 7, 2021 0 Comments
Ziyini iziphicaphicwano futhi yini umsebenzi wazo?
Anonymous Answered question May 7, 2021
Vezi (anonymous)	 Posted May 7, 2021	 0 Comments
Endulo yabe ingekho yonke le midlalo edlalwa namuhla kodwa izingane zazichitha isizungu ngokudlala wona lo mdlalo. Okumangalisayo ukuthi lo mdlalo wadabuka nobuciko bonke bukaZulu futhi ubonisa izifundo zenhlonipho nobuhlakani bengqondo. Usadlalwa nanamhlanje, kodwa nakuba ungasenalo isasasa nedumela.
Lo mdlalo ubudlalwa kusihlwa sekubaswe umlilo endlini, angithi phela kusihlwa kuvamise ukuthi umndeni uqoqane ndawonye futhi sekuqedwe yonke imisebenzi yosuku, ngakho-ke uqhutshwa kalula. Nokho ungase udlalwe noma ngasiphi isikhathi kuye Ngezimo. Abantwana basuke bekitazwa imiqondo befunda ukunakisisa izinto abaphila nazo bebe befunda.
UMPHICI ANGASE ATHI :
“uma kukhona izinyoni ezintathu emthini
Umzingeli ashaye eyodwa ngetshe
Kusala ezingaki….. ??”
Abathatha izinto kalula bazothi kusala ezimbili kanti bashaye phansi kwashunqa uthuli. Phela uma ujikijela itshe ezinyonini ziyandiza zibaleke zonke emthini, akusali lutho lutho lutho. Buhlala obala ubuciko beziphico nesidingo sokujula ngengqondo lapho kuphicwana.
Lo mdlalo uhlola isu lokucabanga ngokushesha ngezinto ezithinta imvelo, izilwane, nabantu nemikhuba yabo, nokunye okuthintana nomdabu nendabuko!
Vezi Answered question May 7, 2021